Balekela kwiindlwana ezizolileyo zaseTanyresgair - I-Airbnb
Balekela kwiindlwana ezizolileyo zaseTanyresgair
Uvimba sinombuki zindwendwe onguSally
Tanyresgair yi 14 acre inja friendly smallholding kwindawo emangalisayo kanye embindini Ceredigion - phakathi Cardigan Bay unxweme ukuya ngasentshona kunye Cambrian Mountains ukuya empuma; naphakathi kweAberystwyth ngasemantla neLampeter ngasemzantsi.
Zombini izindlu zethu zibonelela ngendawo yokupaka yasimahla kunye ne-wifi
Indawo yamatye eneminyaka eli-170 ubudala eTanyresgair iguqulwe yaba ziindlwana ezimbini ezintle neziphangaleleyo. Bobabini babonelela ngendawo yokuhlala etofo-tofo yokuziphakela abantu aba-2 kwiplani evulekileyo yoyilo kwaye ngamnye unomlinganiswa wakhe owahlukileyo. Baye bagcina umtsalane kunye nomlingiswa wenqaba yamatye yokuqala, enemiqadi eveziweyo, iindonga zamatye, imigangatho yeplanga kunye nesileyiti.
Yonwabela: - uxolo nokuzola - akukho traffic - ekupheleni kwendlela yokufikelela eyi-0.5m - akukho bamelwane kwi-1 yemayile macala onke (ngaphandle kwe-SHEEP) - isitiya esisekiweyo, ukuphakama okungama-300m kuhle kakhulu 360 ° iimbono - akukho lungcoliseko luthetha isibhakabhaka esimangalisayo ebusuku. - kumda we-moorland kunye nomzila wokuhamba ukuya echibini kunye nembono-ubomi beentaka ezininzi ezibandakanya iikiti ezibomvu kunye ne-buzzards ebhabha ngaphezulu yonke imihla. I-Tanyresgair Cottages ibonelela ngesiseko esifanelekileyo sokuhamba, ukuhamba ngebhayisikile kunye nokubukela izilwanyana zasendle; kunye nokuba ube kwindawo elula ukonwabela onke amathuba okhenketho anokunikelwa yiCeredigion, Cardigan Bay kunye neeNtaba zeCambrian. Izinto omawuzenze: Ifanelekile njengesiseko sokuhamba, ukukhwela ibhayisekile kunye nokubukela izilwanyana zasendle: - ukuhamba amacandelo eNdlela engaseluNxwemeni ukuze ubone iimbono ezimangalisayo zeCardigan Bay - iindlela ezimbini eziphawulwe ngomjikelo - iYstwyth Trail, iRheidol Trail kufutshane - thatha idolphin ukubukela uhambo ngesikhephe ukusuka I-Quay entsha - jonga i-red-kite feeding e-Nant-yr-Arian - tyelela iindawo zokugcina indalo ezikufutshane ukuze ubone uKhenketho olugqwesileyo lokubukela iintaka: - thatha iVale of Rheidol kaloliwe umphunga uye kwiingxangxasi zeDevil's Bridge - uqhube ungene kwiiNtaba zeCambrian kwaye ujikeleze i-Elan Valley. Amadama - tyelela iilwandle ezintle eMwnt naseLlangranog - buyela umva kwiilali zokuloba ezinqabileyo zase-Aberaeron kunye neNew Quay
Sihlala kwindawo kwaye siya kuhlala sikhona ngexesha lokuhlala kwakho